Sida loo beddelo xulashada galitaanka ee Grub2 | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo beddelo xulashada galitaanka ee Grub2
Grub Waa liiskaas ka muuqda kumbuyuutarkayaga oo noo oggolaanaya in aan dooranno nooca 'distro' (ama nidaamka qalliinka) ee aan dooneyno inaan xilligan isticmaalno. Taasi waa, in badan oo idinka mid ah waxaad ku arki doontaan Grub dhowr ikhtiyaar oo loogu talagalay Ubuntu, Debian, ArchLinux ama distro kale, iyo sidoo kale ikhtiyaarka ah inaad ku bilowdo Windows (haddii ay dhacdo inaad rakibtay).
Xaqiiq ahaan waxay ka soo gali doonaan xulashada 1aad, guud ahaan iyada oo loo marayo cusbooneysiinta ugu casrisan ee ay ku leeyihiin distoorkooda, kiiskeyga sida caadiga ah waxay ka soo galaysaa Debian kernel v3.2.0-4-686-pae iyadoon loo eegin inaad leedahay kernels kale ama nidaamyada kale ee hawlgalka, ka dibna su'aasha:
Sidee loo qaabeeyaa kombuyuutarkeena si markii ugu horeysay ay u gasho MA ikhtiyaarka ugu horeeya laakiin midka aan dooneyno
In kasta oo ay jiraan codsiyo garaafid ah oo sidan sameeya, halkan waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo iyadoo la isticmaalayo kaliya boosteejada.
Marka hore waa inaan ogaanno xulashooyinka aan haysanno, tanna waxaan ku qori karnaa waxyaabaha soo socda:
Ikhtiyaarradeena ayaa soo muuqan doona, wax sidan oo kale ah:
Sidaad arki karto, sadar kasta oo ka bilaabma «liiska"waa ikhtiyaar. Aynu nidhaahno waxaan rabaa in aan u dejiyo qaab ahaan si nidaamkaygu had iyo jeer u helo (marka ugu horreysa waan ku celiyaa) illaa Windows XP, oo ku yaal / dev / sda1.
Arrintan awgeed waa inaan tafatirno fayl kale, kiiskan waa inaan wax ka bedelnaa: / etc / default / grub
Si tan loogu sameeyo terminal waxaan ku qoreynaa waxyaabaha soo socda:
Haddii aysan haysan suudo lagu rakibay sabab kasta ha noqotee, waa inay markaa maamulaan amarka: su iyada oo lagu weydiin doono lambarka sirta ah, ka dibna ay awoodaan inay fuliyaan: nano /etc/default/grub
Waxaad arki doontaa wax sidan oo kale ah:
Sida aad ku aragtaan sawirka, ayaan tilmaamay GRUB_DEFAULT = 0 taas oo ah xariiqda tilmaamaysa ikhtiyaarka ay ku heli karto si aan toos ahayn. Taasi waa, ka soo qaad in aan rabo laptop-kayga inuu had iyo jeer galo Windows XP asal ahaan (xulashada lambarka 9, sida ku cad sawirka hore) markaa khadkaasi waa inuu noqdaa: GRUB_DEFAULT = 8
Sidoo kale khadka soo socda wuxuu leeyahay: GRUB_TIMEOUT = 5, tan waxaa loola jeedaa waqtiga sugitaanka, ilbiriqsiyada Grub2 uu sugi doono ka hor inta aan la furin ikhtiyaarka caadiga ah, taasi waa, ilbiriqsiyada ay tahay inay adeegsadaan furayaasha falaarta Up iyo Down si ay u bedelaan ikhtiyaarka la heli doono.
Si aad u kaydiso faylka wixii isbeddel ah ka dib oo aad uga baxdo saxaafadda [Ctrl] + [X], ka dibna [S] iyo [Gali]
Marka tan la beddelo, waxaan si fudud u ordi karnaa:
Tani waxay cusbooneysiin doontaa waxa cusub ee ay sameeyeen, waxay isbeddelada ka dhigayaan kuwo waxtar leh.
Iyo voila, waan dhamaynay 🙂
Casharradan waxoogaa way ila dheeraayeen, laakiin macnaheedu maahan in beddelashada aqbalida Grub2 ay adag tahay, runtiina waa wax fudud.
Sikastaba, wax intaa ka badan oo lagudaro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Sida loo beddelo xulashada galitaanka ee Grub2
Isticmaalka terminaalka ee Linux waa muhiim waana mid xiiso leh, laakiin taas waxaan u isticmaalaa grub costumizer, waxaad soo degsataa kaliya hal xirmo oo ku jira ubuntu waadna rakibaysaa, waxay kaa caawinaysaa inaad u habeysid burqan dhinacyada oo dhan, taas oo ah waxa aniga iyo adiga xiisaynaya ha haysan daasad aad u badan ama waqti lumis ah xusuusta amarrada.
Ku jawaab Frank Dávila
Dhibaatooyin ayaa jira ka soo rarista bogga ka soo hubinta linux.net
Haa ... martigelinta hadda kuma filna. Cadayn http://justice.desdelinux.net adiguna waxaad ii sheegtaa sida dhakhsaha badan ee buuggan balooggu u yahay.
Waad ku mahadsantahay caawintaada 🙂
Laakiin maxaa sixir madow ah oo aad sameysay?
Way ka dhakhso badan tahay.
heh heh ... elav horeyba qoraal ayuu uga sameeyay arintaan 😉
Waad ku mahadsantahay talada. Sikastaba, waxaan ku isticmaali doonaa kumbuyuutarkeygii hore markii aan ku dhejinayo Debian oo leh Slackware.
baruhu waa ku fiican yahay ...
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro taas Archlinux si aan u cusbooneysiiyo menu-ka grun amarka soo socda ayaa loo isticmaalaa:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg (loo sameeyo xidid ahaan)
dhinaca kale 'distros' waa: grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Xaqiiqdii uma maleynaynin inay fududahay in la sameeyo.
Mawduuca waan ka yara tagayaa, laakiin waxaan ka faaiidaystaa fursad aan ku waydiiyo, wax dheeri ah mala soo gelin karaa CD-ga ama USB-ga Grub2?
Hal shaki, markaan arkey tusaalaha, WAAN Aaminsanahay in ikhtiyaarka koowaad yahay 0, sidaa darteed WinXP waxay noqon laheyd 8. Tani ma saxbaa?
Runtii, aad baad ugu mahadsan tihiin digniinta, horay ayaan u tifaftiray boostada 🙂
Mahadsanid, waad u dhigtay siduu yahay, FUDUD
Ku jawaab marlon ruiz
Ma sharxi kartaa sida loo beddelo wajiga murugada, fadlan, 😀
Waxaan horeyba u daabacnay dhowr waxyaalood oo ku saabsan Grub, sida loo dhigo ereyga sirta ah, sida loo beddelo muuqaalkiisa, iwm, halkan ka daawo - » https://blog.desdelinux.net/tag/grub/
Waxaan tijaabiyaa haduu kujiro fedora, fedorasha galmadu way ka duwantahay qadiyadii oldbian
Ku jawaab asd
Aad baad ugu mahadsantahay casharka oo noo fududeeyay noo KZKG ^ Gaara.
Jawaab José Jaime
Aad baad u mahadsan tahay, mawduuca ayaa sax ahaa. Waan kaa bartay.
Jawaab Ricardo Brito
aad u fiican saaxiibkay, aad u faahfaahsan
Jawaab Erick Azeem Portillo Acosta
Wax badan ayey i caawisay.
Ku jawaab Sanpeter
Kufilan qashinka 2.02 beta ubuntu 14.4
Aad baad u mahadsan tahay, wax ku ool ah, toos ah, fududahay in la fahmo… .. kana fiicnaado disk nool oo leh supergrub ama waxyaabo aad u adag. Waad ku mahadsantahay waqtigaaga dadka kale
Waa salaaman tahay KZKG ^ Gaara, dhawaan waxaan iibsaday kumbuyuutar la'aan, waxaan ku rakibey daaqadaha 7 ugu dambayntii ka dibna Ubuntu 14.04.
Markii aan isku dayo inaan u dejiyo si aan ugu kiciyo daaqadaha 7 markii hore, waxaan wax ka beddelaa feylka galka laakiin waxaan galiyaa lambarka aan ku dhejiyay asal ahaan (midka daaqadaha 7, kiiskeyga GRUB DEFAULT = 7, ama mid kale) ma sameeyo ka dhaqaaq ubuntu markaan damiyo iyo kombuyuutarka mar labaad. Waan cusbooneysiiyay ka dib markii aan wax ka beddelay sidaasna ma noqonayso.
Ma garaneysaa sabab kasta oo xitaa haddii aan wax ka beddelo feylka bootku uusan ka dhaqaaqin Ubuntu?
hello sidee tahay, dhibaato ayaan qabaa, waxaan rakibay ubuntu 14.10 iyo mint 17.1, waxaan go aansaday inaan rakibo aasaasiga os luna, markii aan sidaa samaynayey, cirifka ayaa wax laga badalay oo ubuntu laga badalay inuu noqdo ikhtiyaarka asalka ah inuu ahaado booska 5 , iyo ka dib markaad codsato Isbedelada sida aad u sheegto si kasta oo aanan u sameyn karin ubuntu dib-u-habeynta hawlgalka oo aan uga tago os aasaasiga ah ikhtiyaarka ugu dambeeya. Maxaan ka qaban karaa, aad baad u mahadsan tahay, waan ku qanacsanahay jawaab deg deg ah. mahadsanid.
Aad baad u mahadsantahay !!!
Waxay iga caawisay wax badan, waxaan durba bilaabay inaan walwalsanahay. Laakiin waad ku mahadsan tahay casharradan, in kasta oo ay yihiin wax "aasaasi ah", haddana waa muhiim
Gacaliye aad u guuleysta, aqoontaada oo aad u fudud oo fudud ayaa wax badan iga caawisay, mahadsanid
Mahadsanid! Re fudud oo si fiican loo sharaxay.
Ku jawaab Tincho
Sideen u hagaajiyaa grub2 si aan uga bilaabo disk kale midkii hore loo qaabeeyey?
Salaan. Sharaxaad wanaagsan
Ka dib markii aan isku hagaajiyay murugada, hadda Windows ma soo baxo ... Aad ayuu uga yar yahay xulashada boot-ka ugu horreeya ... Maxaan sameyn lahaa si aan u hagaajiyo ... Thanks
Jawaab Jose Tovar
Salaan Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga. Waxaan u hoggaansamaa faallooyinka IMS, fudud oo toos ah. Farxad
Sharaxaad fudud oo si aad u wanaagsan loo soo bandhigay Mahadsanid
Ku jawaab Santi
Maxamed gubtay dijo
saaxiib, sawirku wuu fiicanyahay, laakiin waxaan jecelahay inaan ku isticmaalo TIMEOUT 15s / px ka badan, waa talo adiga kugu habboon.
Waxaad sidoo kale ku darsatay kebab baradho cocacolo bilaash ah, waxaad ku bixisaa kebigayga
nasiib noloshaada ♥
Ku jawaab Mohamed quemequemo
Waxaad dhahdaa INFIDEL, waan ku dhagxiyey oo xitaa ma ogaanaysid uuuhuhuhuhuhuhuhu
Waxaan ku weydiinayaa su'aal adigu isla Windows ma ka sameyn kartaa? Waxaan sharxayaa waxaan rabaa inaan awood u yeesho inaan kubilaabo mid ama nidaam kale oo hawlgal kumbuyuutar kumbuyuutareed ah, sidaa darteed haddii aan kujiro Linux waxaan wax ka beddeli karaa Grub si aan u bilaabo Windows. Hadda haddii aan ku jiro Windows, miyaan wax ka beddeli karaa si aan u bilaabo Ubuntu?
Jawaab Adrian Abadin
Hi ADrian, su'aashaadu waa mid aad u xiiso badan, waxaan ka xumahay inaan kuu sheego in daaqadaha 98 aadan awoodin, waa ceeb laakiin waa inaad xajisaa….
sidoo kale kiniiniyada waxay isku dhacayaan MAC Yosemite, FUCK WAAN KU SOO KORDHAY DHULKA HORTA
By the way ma jeceshahay database-yada?
Waad ku mahadsantahay sharraxaaddaada, aad u ballaadhan oo sax ah
Jawaab YOUSSEF BETTI DAIFI
Youtube gaabis ah? Xayeysiis wanaagsan? (Dayactir)
Codsiyada lagu xoojinayo Ingiriisiga Archlinux (iyo kuwa kale)